Kitra - "Orange Pro League" :: Voatanan’ny FCA Ilakaka sahala ny Fosa Juniors • AoRaha
Kitra – « Orange Pro League » Voatanan’ny FCA Ilakaka sahala ny Fosa Juniors
Solafaka tao an-taniny ny Fosa Juniors. Notazonin’ny FCA Ilakaka, tamin’ny isa nitovy samy tsy nitoko, ny solontenan’ i Boeny, tao amin’ny kianja Rabemananjara, Mahajanga, omaly. Lalao tara tokony ho natao tamin’ny andro faharoan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara taranja baolina kitra, Diviziona elita, na ny “Orange Pro League” ity notanterahina ity.
Niaina tamin’ny fiarovan-tena sy ny valim-panafihana ny ekipan’Ilakaka, izay any amin’ny faritra mena hidinana Diviziona faharoa. Maro ireo baolina tokony ho fatin’izy ireo saingy nahay niaro ny haratony i Fabrice, mpiandry tsatokazon’ny Fosa Juniors. Manana isa sivy mitovy amin’ny an’ny Zanakala FC izy ireo, taorian’ iny lalao tara iny.
Niezaka ny nanafika kosa ny mpampiantrano tamin’io lalao io saingy nanao ny ainy tsy ho zavatra tsy hidiran’ny baolina tao anatin’ny harato narovany i Pierre, mpiandry tsatokazon’ ny FCA Ilakaka. Nanampy azy nanidy ihany koa ny vodilaharana i Daquin sy ny namany.
Nahazo isa iray saingy mandiso ny fanantenana ireo mpijery mpanohana azy amin’ny mety hitarihana aorian’ireo lalao tara roa ny Fosa Juniors. Isa 30 no azy ireo, ankehitriny, raha mbola eo alohany hatrany ny Cnaps Sport (isa 33) sy Cosfa (isa 31). Itovizana kosa ny isa ho an’ny Fosa Juniors sy ny Ajesaia saingy manatombo amin’ny lalao tsy vita ny solontenan’i Boeny dia ny fifanandrinana amin’ny Zanakala FC, hatao any Mahajanga.
Rehefa avy niala sasatra kely, hiverina amin’ny andro faha-16 indray ireo klioba roa ambin’ny folo, amin’ny faran’ ny herinandro ho avy izao.
Fifandonana tamin’ny dahalo :: Zandary mpiana-draharaha maty voatifitra
Fanafihana mitam-basy :: Polisy iray notifirin’ny jiolahy niaraka tamin’ny rahalahiny